★မြန်မာ့အလင်း★: MORE Drills! South Korea & US are at it AGAIN.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:38 AM
"zawzaw:မဝေနှင်းပွင့်သုံမှာ ကိုယ်ဝန် ၆လရှိ၏ ဘယ်သူနင့်ရမှန်းမသိ နောက်တွင် မွတ်ဆလင်များက အလာရှင်နှင့်ရတာအလာရှင်ပေးတာဟုပြောကြ၏တကယ်တော့မဝေနှင်းပွင့်သုံကို ကျနော်လုပ်တာဗျကျနော်နဲ့ရတာ ဝေနှင်းပွင့်သုံကရှက်လို့မပြောတာ
အလာလုပ်တာလား ဇော်ဇော်လုပ်တာလား "
စအိုပေါက်ကြီး မုဒိမ်းကျင့်ခံထားရတဲ့ ကျွန်ကုလားpyaypa
၁။ အင်္ဂလိပ် အင်ပါယာပျက်သွားတာ Allah ကြောင့်လား? Allah ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်က အခုအချိန်ထိ ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် Allah ကို ရှိခိုးနေတဲ့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေက ဆင်းရဲလွန်းလို့… ချီးကို ကောက်စားနေရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Allaha ကို ရှိခိုးရင် ဒုက္ခပိုရောက်တယ်ဆိုတာ မြင်သာပါတယ်။ Allahကို စော်ကားဖို့ သင့်ပါတယ်။ ၀ါးဟားဟား . . ၀ါးဟားဟား။
၂။ မျက်မှန်တင်ဦးကမြန်မာပြည်မှ မဟုတ်ဘူး . . . . တကမ္ဘာလုံးမှာ အိမ်ရှင်တွေနဲ့ ကုလားတွေ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလဲ.. သူ့လက်ချက်ပဲလေ။ သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစားတဲ့ ကျွန်ကုလားတွေကို ဒုက္ခပေးတာ ဦးတင်ဦးပဲ။ Allah က အဲဒါကြောင့် ဦးတင်ဦးကို အပြစ်ပေးတာပါ. . . . ၀ါးဟားဟား။
၃။ Allahက ဘာဖြစ်လို့ တောင်ကြီးမှာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးမယ့် ဦးရှုမောင်ကြီးကို ဖန်ဆင်းလိုက်တာလဲ? မကောင်းတဲ့ ဦးရှုမောင်ကို ဖန်ဆင်းတဲ့ Allah သည်သာ တရားခံအစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဖန်ဆင်းလို့ စောက်ကျွန်ကုလားတွေ လမ်းဘေးမှာ ခွေးလို ၀က်လို အသတ်ခံရတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဖိနပ်ချေးသုပ်ပြီး တရားခံAllahရဲ့ ပါးကို ရိုက်ပြီး အပြစ်ပေးသင့်တယ်။
၄။ Allahက ဘာဖြစ်လို့ ဂေဟာပြောင်းပြီး ဒုက္ခပေးပေမယ့် ဦးတင်ဦး S2 ကို ဖန်ဆင်းလိုက်တာလဲ? တရားခံအစစ်ဟာ Allah ဖြစ်ပေတယ်။ သူဖန်ဆင်းတဲ့ ဦးတင်ဦး S2 ကြောင့် မွတ်ဆလင် အဖိုးကြီးတွေ ဒုက္ခရောက်ကုန်တာ။ ဒါ့ကြောင့် ဖိနပ်ချေးသုပ်ပြီး တရားခံAllahရဲ့ ပါးကို ရိုက်ပြီး အပြစ်ပေးသင့်တယ်။
၅။ Allahက ဘာဖြစ်လို့ ပလီဖျက်မယ့် ထောက်လှမ်းရေး ဦးခင်ညွှန့်နဲ့အဖွဲ့ကို ဖန်ဆင်းလိုက်တာလဲ? တရားခံအစစ်ဟာ Allah ဖြစ်ပေတယ်။ သူဖန်ဆင်းတဲ့ ဦးခင်ညွှန့်နဲ့အဖွဲ့က ပလီဖျက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖိနပ်ချေးသုပ်ပြီး တရားခံAllahရဲ့ ပါးကို ရိုက်ပြီး အပြစ်ပေးသင့်တယ်။
၆။ ပလီဖျက်တဲ့ အစ္စရေးကလူတွေကို သတ်တာ လူလေး ၁၀၀ တောင်မပည့်ပါဘူးကွာ။ မွတ်ဆလင် ပါကစ္စတန်ကို ရေကြီးပြီးသတ်လိုက်တာ ထောင်ပေါင်းများစွာသေပြီး သန်းနဲ့ချီပြီး ဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်။ Allahက ပလီဖျက်တဲ့ အစ္စရေးကို တော်တော် သက်ညှာတယ်နော်? ၀ါးဟားဟား
ဒီမယ်. .. . စောင့်ကြည့်နော်။ ကုလားကို အရုပ်ရေးတယ်ဆိုတဲ့ တဘောင်ဟာ တိဘက်မှာလဲရှိတယ်။ မှန်လားမှားလားဆိုတာ အချိန်က ပြောမှာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ မွတ်ဆလင် ပလီတလုံးမှကို မရှိစေရဘူးကွ။ ရှင်းလား?
စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် စောက်ကုလားများကို အစွန်းရောက် ဆဲနေတဲ့
ငါလိုးမသားဇော်မျိုး. ခွေးကောင်. Allah ကိုစော်ကားရင် မင်းပထွေးလည်းဆင်းမကယ်နိုင်ဘူးနော်.
မြန်မြန်အာပတ်ဖြေလိုက်ပါလို့ အကြံပေးချင်တယ် မျိုးမစစ်ကောင်ရဲ့.